Casemiro Oo Iska Diiday In Magaciisa Lagu Qoro Goolkii Uu Ka
Laacibka Real Madrid ee Casemiro ayaa iska diiday in magaciisa loo nisbeeyo, laguna ladho goolkii uu sida quruxda badan uga soo shaqeeyey Karim Benzema ee uu isaguna shabaqa taabsiiyey.
Ciyaar ay Real Madrid marti ugu ahayd Espanyol Axaddii ayay kaga soo adkaadeen 1-0 ay hoggaanka horyaalka lix dhibcood ku qabteen, waxaana hadal haynta ugu badan ay ka dhalatay qaabka uu Karim Benzema isaga oo sii jeeda cidhibta ugu dhiibay kubadda.
Casemiro oo ka hadlay guusha kooxdiisa iyo goolka uu dhaliyey ayaa ku dooday in goolka uu iska leeyahay Karim Benzema ee aanu isagu lahayn, waxaanu yidhi: “Goolku wuxuu ahaa kii Karim. Waxaanu la qabsanay tayada uu leeyahay iyo tayada uu ku ciyaaro. Waa inaan la dabbaal-dego isaga, sababtoo ah, amaanta isaga ayaa iska leh.”
Casemiro waxa kale oo uu ka hadlay sidii ay isku fahmeen Benzema ee uu kubadda ugu soo dhiibay, waxaanu yidhi: “Waanu ognahay tayadiisa, waana sababta aan kubadda uga dalbaday, waxaan ogaa inuu iisoo dhiibi doono.”
Xiddiga reer Brazil waxa uu tilmaamay in kooxdiisu aanay lumin doonin hoggaanka horyaalka, ayna filayaan inay ku dhamaysan doonaan lixda kulan ee hadhay iyagoo ka horreeya Barcelona, waxaanu yidhi: “Waxaanu diiradda saari doonaa nafahayaga, ciyaar ba ciyaarta xigta.
“Espanyol hadda waa wax tegay, waxaananu waqti horeba kasii fikiraynaa Getafe.
“Waxaanu doonaynaa inaanu ku guuleysano ciyaar walba.
“Wali waxa jira dariiq dheer oo naga horreeya, laakiin waxaanu ognahay in ciyaar kasta oo hahday ay ka dhigan tahay final, waxaananu rabnaa in horyaalka aanu ku guuleysano.”